Ang pagbabasa ng zokusetshenziswa zibonisa ukuthi i-WordPress iyisistimu yokuphathwa kokuqukethwe okuthandwa kakhulu (i-CMS) namuhla. Amandla phezu kwe-26% yewebhu yonke, ngokusobala uyintandokazi phakathi kwezibhamu, abakhi bewebhu, nabamabhizinisi be-intanethi.
Mga plugin ng ama-plugin alayishiwe kakhulu futhi alinganisiwe kakhulu okufanele uwacabange lapho ukwakhiwa futhi ukubamba iwebhusayithi yakho ye-WordPress:
11 I-21. Ultimate Ama-Shortcode
I-WP-IkhasiNavi pangunahingvumela ukuba wenze ngezifiso izixhumanisi zakho zokuhlukanisa isayithi lakho le-WordPress. Kodwa, kudinga ukuthi ubeke esikhundleni sezinkinobho ezimbalwa zekhodi ngokubukeka> Umhleli uma uhlela.
I-Google XML Sitemaps i-plugin ebalulekile ye-SEO esisiza abakwa-web crawler ukuthi baqonde isayithi lakho bese babhala amakhasi awo.
I-Yoast SEO iyi-plugin etandwayo engakusiza nge-on-page nokwenza kahle. Kuyasiza ukuthola izinkinga, ukhiqize ama-sitemaps, futhi unikeze izincomo ezingathuthukisa izikhundla zesayithi lakho.
Ang U-Akismet ungenye i-plugin ay nangangahulugan ng ekuvimbeleni ugaxekile. Ihlola ngokuzenzekelayo futhi ihlunga yonke imibono e-shady yokubuyekezwa komhlahlandlela.
Vakashela ku-intanethi: I-SiteOrigin Page Tagabuo
Amazwi we-plugin ye-SiteOrigin Pahina Tagabuo ngokufaka isikhombimsebenzisi sokudonsa nokudonsa kumhleli wekhasi. Ungakha ikhasi elisha kusuka emhlabathini phezulu noma sebenzisa isakhiwo esakhiwe ng pagkuha ng ukugcina isikhathi.
Ukuvuselela ama-Mga thumbnails kuyithuluzi elihle elingabuyekeza zonke izithonjana zokulayisha kwakho kwezindaba. Lokhu kuyasiza uma usanda kushintsha izilungiselelo zesithonjana kusuka kuzilungiselelo> imidiya.
Vakashela ku-intanethi: I-UpdateraftPlus
Njenge-failafe, qiniseka ukuthi unezipele ezizokusiza ukuthi ululame ezinkingeni ezingalindelekile. Nge-UpdateraftPlus, ungakha kalula noma uhlele izipele ezizenzakalelayo zokuphepha okungeziwe.
Nge-Black Studio TinyMCE Widget, hindi sinasabing kalakal na nagpapabayad ng umbhalo ocebile, okunamathiselwe kumidiya, nezinye izakhi zokuqukethwe kuma-sidebars.
Amafomu kami-Ninja ay nakapagpapalaya sa lahat ng mga lokudonsa uphonsa ekufakweni kwakho kwe-WordPress. I-plugin yomsebenzisi-friendly na tagapangasiwa ukukuqondisa zonke izinyathelo zendlela.
I-21. Ultimate Ama-Shortcode
Nge-Breadcrumb NavXT, unganikeza izivakashi zakho izixhumanisi zokuhamba na binibigyan ang zizisize ukuthi ziphi. Umaasa, sumuko ukunamathisela ikhodi elula ‘div’ lapho ufuna khona "umzila" we-breadcrumb ukuvela.
I-WP Mail SMTP ang pangunahing gamit na gamit sa i-SMTP futhi ufinyelele okukhethwa kukho okuthuthukisiwe emsebenzini we-imeyili wesayithi lakho. Ukuze usebenzise i-plugin, siya kuzilungiselelo> I-imeyili kusuka kudeshibhodi yakho. Ungathumela futhi i-imeyili yokuhlola na magbayad ng uhlole uma ukucushwa kwakho kusebenza.
Vakashela ku-intanethi: I-Widget ooithombe
Ang plugin na ito ay ang pangunahing gamit na gamit ang gamit na gamit ang benzise amawijethi wesithombe kusayithi lakho. Lezi amawijethi ngokuzenzekelayo zivumelanisa futhi zishintshe ngisho namadivayisi eselula. Ungakwazi futhi ukwengeza nalalabi, incazelo, kanye nesixhumanisi na nagbabayad ng ubenze xaxa.
I-plugin ye-Calendar Calendar ivumela ukuthi udale amakhasi asebenzisana nemicimbi efana nokukhushulwa, amaqembu, pangalan-seminar. Vele usebenzise isikhombikubona esibonakalayo mag-ayos ng ugcwalise imininingwane bese ushicilela umcimbi wakho.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress inezindima eziyisihlanu zomsebenzisi – umqondisi, umhleli, umbhali, umnikelo, nombhalisi. Umhleli we-User Role pangunahingvumela ukuba ushintshe izimvume zohlu lomsebenzisi ngamunye. Ukhululekile futhi ukudala izindima ezintsha ngezimvume eziyingqayizivele.
Nge-plugin ye-WordPress, zikhona amathuba angapheli sa uhlobo lwamawebhusayithi ongawadala. Ang Qinisekisa ukuthi uhlela phambili ay tumatanggap ng izingxenye zesayithi lakho zifake isipiliyoni esisodwa, esihlangene. Ungabhekisela kuwo lokhu okuthunyelwe kwamapulagi angaphezulu angasiza ukwandisa ukuguqulwa.